musha > Palmitoylethanolamide (Pea)
Kana iwe uchitsvaga yemhando yepamusoro Palmitoylethanolamide (Pea) upfu hwekutengesa, ipapo uri panzvimbo chaipo. Isu tiri vamwe vevanonyanya kuzivikanwa, vanoziva, uye vane ruzivo Palmitoylethanolamide (PEA) vagadziri muChina. Isu tinopa yakachena uye yakasungirirwa zvigadzirwa izvo zvinogara zvichiongororwa nepasirose-kirasi yechitatu-bato murabhoritari kuve nechokwadi chekuchena uye chengetedzo. Isu tinogara tichiendesa odha kuyambuka US, Europe, Asia, nedzimwe nzvimbo dzepasi. Saka kana iwe uchida kutenga Palmitoylethanolamide (PEA) poda yemhando yepamusoro inogoneka, ingotibata pa cofttek.com.
Chii chinonzi Palmitoylethanolamide inoshandiswa?
Ndeipi mhedzisiro mhedzi?
Phenethylamine zviri pamutemo here?
Inoita nguva yakareba sei PEA?
Phenylethylamine ichakundikana here bvunzo yemushonga?
Pea supplement yakachengeteka here?
Zvinotora nguva yakareba sei kuti Peas ipinde mukati?
Unogona kutenga phenylethylamine muzvitoro?
Zvinotora nguva yakareba sei kuti pea isashande?
Pea inobatsira nekurara here?
Pea inokurudzira here?
Phenylethylamine anogara kwenguva yakareba sei musisitimu yako?
Chokoreti ine phenylethylamine here?
Iko phenylethylamine inowanikwa kupi?
Phenylethylamine inokukwiridzira iwe here?
Hordenine anogara kwenguva yakareba sei mune yako system?
Palmitoylethanolamide (PEA) yakachengeteka here?
Ndekupi kwandingawane Palmitoylethanolamide?
Chii chinonzi pea cream?
Nei Tichida Palmitoylethanolamide (PEA)?
Chii chinonzi PEA ye fibromyalgia?
Chii chinonzi neuropathic pain relief?
Ndingaite sei kuti ndivate nemarwadzo europathi?
Mvura yekunwa inobatsira here neuropathy?
Chii chinonzi pea mvura inoshandiswa?
Pea inobva kupi?
Chii chinonzi kurapwa kwepea?
Pea inowanzoonekwa nevarwere vane hypovolemia?
Ndeapi eanotevera anogona kuchinjika zvikonzero zvepea mutinhimira?
Palmitoylethanolamide (PEA) ndezve endocannabinoid mhuri, boka remafuta acid amides. PEA yakaratidzwa kuve ine analgesic uye yekudzivirira-kuita basa uye yakashandiswa mune dzinoverengeka kudzidziswa zvidzidzo zvakanangana nekutarisira kwekusingaperi kurwadziwa pakati pevarwere vakura vane zvakasiyana zvinokonzerwa nekiriniki mamiriro.
Kutorwa muzvikamu zve 500mg-1.5g pamwero, maawa mashoma ega ega, PEA inopa mushandisi manzwiro euphoria, simba, kukurudzira, uye kugarisana zvakanaka. Esp painosanganiswa ne mao-b inhibitor, hordenine, PEA inotora danho nyowani nyowani yekufara uye mufaro wakazara.
Iko hakuna kuzivikanwa kunetsekana divi-mhedzisiro. PEA inogona kutorwa pamwechete nechero chinhu. Inosimudzira marwadzo-kurerutsa mhedzisiro yeakare analgesics uye anti-inflammatories. Palmitoylethanolamide inogona kushandiswa mukubatana nezvimwe zvinhu pasina mhedzisiro.
Phenethylamine (PEA) chinhu chinogadzirwa nemakemikari, yakasikwa monoamine alkaloid, uye inoteedzera amine, iyo inoshanda senge yepakati tsinga system inosimudzira muvanhu.
Kana ikatorwa nemuromo: Kutora palmitoylethanolamide POSSIBLY SAFE kune vakawanda vakuru kana ichishandiswa kwemwedzi mitatu. Zvinogona kuitika mhedzisiro, senge kushungurudzika mudumbu, hazviwanzo. Iko hakuna kukwana kwakaringana ruzivo rwekuziva kana palmitoylethanolamide yakachengeteka kushandisa kwenguva yakareba kupfuura mwedzi mitatu.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti melatonin haina kunyatso kudzorwa neKudya neDrug Administration (FDA). Imhaka yekuti melatonin haina kutarisirwa semushonga. Naizvozvo, inogona kutengeswa sekuwedzera kwekudya senge mavitamini uye zvicherwa, izvo zvisina kunyatso kutariswa neDFA.
PEA chinhu chechisikigo chinogadzirwa nemuviri; inoshanda kwazvo uye yakachengeteka kushandisa sekuwedzera pakurwadziwa uye kuzvimba.
Pizi dzinotora mazuva manomwe kusvika makumi matatu kuti dzimere. Mazai anokura nekukurumidza kana tembiricha yevhu iri 7 kusvika 30 degrees Fahrenheit. Unogona kumhanyisa maitiro ekumira nekusvina mapea kwemaawa makumi maviri nemana kusvika makumi mana usati wadyara. Ehe, pane zvimwewo zvinhu zvinokanganisa kuti peas inokurumidza sei kumera nekukura.
Izvi zvinowedzera kana zvichipedzwa rubatsiro mukuwedzera iwo huwandu hwehuropi chiitiko uye kudzikisa kushushikana. Inowanikwa pamusoro pekambani, uye imwe haidi mushonga kuti utenge. Phenylethylamine inoshandiswawo kusimudzira kutarisisa uye kuisa pfungwa.
Isu takagadzira chirongwa chekurapa ichi mushure mekurapa mazana evarwere vanorwadziwa neuropathic. Kubva pane yedu chiitiko chekiriniki, isu tinofungidzira kuti kutanga nemitauro midiki yePEA kwemazuva gumi chete kunogona kubatsira kukurumidza kusvika zvakakwana ekurapa mazinga ePEA.
Rudzi rwemafuta anowanikwa zvakasikwa mumuviri anogona kuve kiyi yekurara kwakanaka kwehusiku. Vatsvagiri vari kutarisira kuti mamorekuru anozivikanwa sePEA - kana palmitoylethanolamide - aigona kwete kungobatsira nehope chete asiwo kurwisa marwadzo nekuderedza kuzvimba.
Inogona kutorwa pamwe chete nemimwe mishonga yekurwadziwa kana wega, sekurairwa neyako nyanzvi yezvehutano, kutsigira zororo rekurwadziwa. PEA inogona zvakare kubatsira kudzikisira kuvimba nemishonga yekurapa yakasimba iyo inokonzeresa isingadiwe mhedzisiro. Maximum kubatsirwa kunogona kutora kusvika pamwedzi mitatu asi mhedzisiro inowanzoonekwa mumavhiki e3-4.
Chokoreti ine yakanyanya kusangana mune chero chikafu che phenylethylamine, inova kemikari inogadzirwa muuropi kana munhu ari murudo. Asi basa re "chokoreti amphetamine" rinopokana. Mazhinji kana asiri ese chokoreti-yakatorwa phenylethylamine inogadziriswa isati yasvika iyo CNS.
Mune mhuka, phenethylamine inogadzirwa kubva kuamino acid L-phenylalanine ne enzyme inonhuhwirira L-amino acid decarboxylase kuburikidza ne enzymatic decarboxylation. Pamusoro pekuvapo kwayo mumhuka dzinoyamwisa, phenethylamine inowanikwa mune zvimwe zvipenyu uye chikafu, senge chokoreti, kunyanya mushure mekuvirisa kwehutachiona.
Inotorwa mumadhora e500mg-1.5g pahuremu, maawa mashoma ega ega, PEA inopa mushandisi manzwiro euphoria, simba, kukurudzira, uye hutano hwese. Esp painosanganiswa ne mao-b inhibitor, hordenine, PEA inotora nhanho nyowani yekufara uye mufaro wakazara.
Mubhari, mazinga e hordenine anosvika pakakwirira mukati memazuva mashanu kusvika kumazana ekumera, zvobva zvadzikira zvishoma nezvishoma kusvika kwasara zvisaririra mushure memwedzi mumwe. Uyezve, hordenine inowanikwa munharaunda zvakanyanya mumidzi.
Kunyangwe Palmitoylethanolamide inoshivirirwa nemutumbi, kana vanhu vakacherekera mhedzisiro, vanorayirwa kuti vadzikise chiyero chematani kusvika 400 mg pazuva.
Zvinotonyanya kukosha ndezvekuti, imba yacho haifanire kutorwa kwemwedzi inopfuura mitatu. Yakachengetedzwa PEA kushandiswa kunogona kutungamira kumatumbu matambudziko. Nekudaro, iyo ndeyemhedzisiro-iyo haina kumboonekwa. Zvinotonyanya kukosha, PEA haifanirwe kushandiswa paganda uye nepamuviri uye vanoyamwisa vakadzi vanofanirwa kugara kure nekushandiswa kwayo sezvo pasina kuwanikwa kwakakwana kwekutsvaga kana humbowo hwekuti mushonga wakachengeteka pamapoka aya. Saizvozvo, kana iwe uri kurwara nechero mamiriro, zvinogara zvakanaka kubvunza nachiremba usati watora supplement sePalmitoylethanolamide.
Mhinduro ndeyo Cofttek. Cofttek inowedzera zvigadzirwa zvemhando yepamusoro izvo zvakavapo muna 2008. Iyo kambani inotora kudada kukuru muboka rayo rine hunyanzvi reR&D iro rinoshanda kutenderera nguva kuona kuti mbishi iri kupihwa vatengi ndeyemhando yepamusoro kwazvo. Zvinotonyanya kukosha, kambani inodyara zvakanyanya pane biotechnology uye kuongorora kwehunyanzvi. Zvese zvigadzirwa zvinotengeswa nekambani zvakagadzirwa mune yavo hombe-huru, yepamusoro-tech biochemical fekitori iyo inozvirumbidza yevakakura vatengesi masisitimu uye zvazvino hunyanzvi nzvimbo. Iko kuzvipira uku kwakaitwa nekambani kugadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro izvo zvakaita kuti Cofttek ive zita rinozivikanwa mumusika wezvinhu zvisina kugadzirwa. Nhasi, ine vatengi pasi rese.
PEA kirimu kirimu ine kirimu ine yakakwana yeakasikwa uye inodzivirira fuma palmitoylethanolamide (PEA). Iyo PEA kirimu saka inogona kushandiswa seyakanaka yekuwedzera mhedzisiro yemacapsule mumuviri.
Palmitoylethanolamide (PEA) ine mafuta mamorekuru anogadzirwa mudiki nemuviri, kunyanya mukupindura kukuvara kwetishu kana nyama kana kukuvara kwemhasuru. PEA inogadzirwa nemasikirwo emuviri mumuviri mukupindura kurwadziwa kana kuzvimba. Palmitoylethanolamide, inozivikanwawo sePEA inowanzoitika-inowanzoitika lipid iyo inowira pasi pemafuta easidhi amides boka. Kunyangwe ichi chigadzirwa chinogadzirwa ne immune immune system, iripowo mumhuka nezvirimwa uye nekudaro, inogona kutorwa kubva kunowanikwa kunze, senge zai yolk, soy lecithin, alfalfa, mukaka, nzungu uye soya. PEA ine simba analgesic zvivakwa uye, nekudaro, inokwanisa kukanganisa akawanda akakosha epanyama mabasa mukati memuviri.
PEA inonyanya kutorwa nekuda kwekurwisa-kupisa uye kurwadziwa-kudzora zvinangwa. Saka, PEA inoshanda sei kamwe mukati memuviri? Kamwe mukati memuviri, PEA inozvisunga inoisa kune yakanangwa saiti iyo inodzima yekuzvimba basa kwesero mushure mekusunga maitiro. Zvinotonyanya kukosha, kumwe kutsvagurudza kunoratidza kuti analgesic mhedzisiro yePAA inogona kuverengerwa nekugona kwekomboni yekukanganisa mashandiro emaseru emagetsi anoshanda anoendesa zviratidzo zvekurwadziwa. Zvisinei nekuti chii chaicho mashandiro acho, chinhu chimwe ndechechokwadi kuti PEA inopa zororo kubva mukurwadziwa kweuropathiki pamwe nekuzvimba.
Kwemakore mashoma apfuura, Palmitoylethanolamide (Pea) yakawona kune kamwe kamwe kuvhiyiwa mukuzivikanwa kwayo. Kunyangwe izvo zvinoshandiswa pakurapa zvePMA zvakawanikwa kare mumakore a1950 uye kubva ipapo, vesaenzi nevatsvaguriri vakadzidza zvakawandisa, mumakore mashoma apfuura, kufarira kwePMA kwakawedzera manhanga. Izvi zvinonyanya kukonzerwa nebasa rekudzivirira uye rekuporesa iro ringa piwe mukati memuviri pamwe nekugona kwaro kubata rakasiyana siyana rekuzvimba uye nyaya dzechiropa.
Nekudaro, muviri wemunhu unoburitsa PEA mune diki kwazvo uye kazhinji kazhinji kwete, iyi huwandu haina kukwana kudzvinyirira kuzvimba uye kurwadziwa uye nekudaro, vanhu vanowanzo kurairwa kutora PEA zvinowedzera. Kuderedza marwadzo uye kuzvimba ingori chete yeakawanda mabhenefiti ePea.
Sechisikirwo chinoitika zvinhu PEA zvinowedzerwa zvinotsanangurwa muAustralia, uye nedzimwe nyika zhinji, sechigadzirwa chikafu, kwete mushonga. PEA yakaratidzirwa kuve iine antiinfigueatory, antinociceptive, anticonvulsant uye neuroprotective zvivakwa uye iri kuramba ichishandiswa pakurapa kurwadziwa kusingaperi.
Neuropathic Pain Treatment Anticonvulsant uye antidepressant zvinodhaka kazhinji ndiwo mutsara wekutanga wekurapa. Zvimwe zvidzidzo zvekurwadziwa neuropathic zvinoratidza kushandiswa kweasina-steroidal anti-anogumbura zvinodhaka (NSAIDs), senge Aleve kana Motrin, anogona kurerutsa marwadzo. Vamwe vanhu vangangoda painkiller yakasimba.
Kurara nemabvi ako akakwidziridzwa kunogona kurerutsa zviratidzo zvako zvinorwadza nekudzikisira kumanikidza kunoitwa nema lumbar discs panzvimbo yetsinga dzako. Rara wakarara kumusana — chengetedza zvitsitsinho nemagaro zvichisangana nemubhedha uye pfugama mabvi zvishoma wakananga padenga.
Maitiro Ekurerutsa Nerve Pain. Ramba uri pamusoro pechirwere cheshuga. Kana uine chirwere cheshuga, chengeta shuga yeropa iri pasi pesimba. Zvifambe. Kuita maekisesaizi kunosunungura marwadzo epanyama anonzi endorphin. Tambisa tsoka dzako. Kana tsoka dzichikanganiswa nemarwadzo etsinga, inguva yekutarisisa pakuchengetwa kwetsoka kwakanaka.
Kwete chete iyo inodziya mvura inozorora, asi inogona zvakare kukurudzira kutenderera mumuviri wako wese. "Inogona kupa zororo ipapo," Vinik anodaro. Asi nekuti chirwere cheshuga neuropathy chinogona kutungamira mukurasikirwa kwekunzwa, ita shuwa kuti mvura haina kunyanya kupisa usati wapinda.
Kwete kushandiswa nevakadzi vane nhumbu. Palmitoylethanolamide inogona kubatsira zvinovaka muviri kugadzirisa kupisa uye kurwadziwa kusingaperi. Inofanira chete kutorwa pasi pekutarisirwa kwechiremba.
Palmitoylethanolamide ikemikari inogadzirwa nemafuta. Inowanikwa zvakasikwa muzvikafu zvakaita semazai emazai nenzungu, uye nemumuviri wemunhu. Inoshandiswawo semushonga.
Epinephrine inofanirwa kupihwa mu1-mg doses mukati mehasha / intraosseously (IV / IO) yega yega 3-5 maminetsi panguva yekushomeka kwemagetsi (PEA) kusungwa. Yakakwira doses ye epinephrine yakadzidzwa uye ikaratidza kusagadziriswa mukupona kana neurologic mhedzisiro mune vazhinji varwere.
Muchikamu che PEA etiologies, pseudo-PEA inowanzo kukonzerwa ne hypovolemia, tachydysrhythmias, yakaderera contractility yemoyo, kana zvipingaidzo kutenderera, senge pulmonary embolism, tamponade, uye mhirizhonga pneumothorax.
Hypovolemia uye hypoxia ndizvo zviviri zvinonyanya kukonzera PEA. Ivo zvakare ndivo vanodzoserwa zviri nyore uye vanofanirwa kuve vari pamusoro pekusiyana kwekuongororwa. Kana munhu wacho aine kudzoka kwekutenderera kwekupararira (ROSC), enderera kune post-moyo kusungwa kutarisirwa.
Kwemakore mashoma apfuura, kufarirwa kwePalmitoylethanolamide kwakapupurira kuwedzera kukuru, kunyanya nekuti vanhu vava nekuziva mashandisiro ayo akati wandei. Mazuva ano, vanhu vanoshandisa Palmitoylethanolamide kunyanya kune analgesic athari, asi zvakare inowanzo gadzirirwa kurwisa chirwere chakakomba, senge chirwere chaLou Gehrig, chirwere cheshuga neuropathy, multiple sclerosis, fibromyalgia, carpal tunnel syndrome, glaucoma, autism, eczema, endometriosis futi akasiyana siyana mamwe matambudziko. Mazuva ano, zvinowedzera zvePalmitoylethanolamide (PEA) zviri kushandiswawo nevanhu kusimudzira uremu. Zvisinei, kumwe kutsvagurudza kunofanirwa kuitwa munzvimbo ino.
① Kwekutanga Kutsvagisa Kunoratidza Kuvimbisa Mhedzisiro Mukurapwa kweLou Gehrig's Chirwere
Chirwere cheLou Gehrig kana Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) chirwere chinotyisidzira hupenyu chinotungamira kukusha kwemotokari-neuron uye pakupedzisira kuora mitezo. Kutsvagurudza kwekutanga kunoratidza kuti palmitoylethanolamide painotorwa neriluzole, inogona kubatsira kuvandudza chiitiko ichi. PEA ndeye endocannabinoid iyo inovandudza pulmonary basa mune ALS varwere.
② Inobatsira neCarpal Tunnel Syndrome
Carpal Tunnel Syndrome chimiro chinokanganisa ruoko. Vanhu vanotambura nechirwere ichi vanonzwa kudedera uye kushaiwa simba paruoko. Mamiriro acho anokanganisa ruoko rwese, kusanganisira minwe yese kunze kwemunwe mudiki. Chidzidzo chegore ra 2017 chakaratidza kuti PEA inogona kunyatso shandiswa kurapa syndromes inoshungurudza, kusanganisira Carpal Tunnel Syndrome. Nekudaro, PEA supplements inogona kutorwa kuti ipinde mukutonga kwekurwadziwa uye kusagadzikana kunokonzerwa neCarpal Tunnel Syndrome.
③ Izvo Zvinoshandawo Kupesana Nechirwere cheshuga Neuropathy uye Fibromyalgia
Chirwere cheshuga neuropathy chirwere cheshuga-chinokonzeresa kukuvara kwenzara. Chimwe chezviratidzo zvakajairika cheshuga neuropathy kurwadziwa mumakumbo nemakumbo. Fibromyalgia, kune rimwe divi, mamiriro anokanganisa musculoskeletal system. Pamwe chete nekuneta uye nenyaya dzekurangarira, chiratidzo chinowanzozivikanwa che fibromyalgia marwadzo mune yese musculoskeletal system.
Ose maviri chirwere cheshuga neuropathy uye fibromyalgia mamiriro anorwadza ayo asiriwo asina kujairika. Neraki, iyo marwadzo anoenderana neaya ese maviri mamiriro aya anogona kudzorwa nekushandiswa kwe Palmitoylethanolamide.
④ Iyo Inogona Kushandiswa Kurapa Zviratidzo zveMazhinji Multiple Sclerosis
Multiple Sclerosis ndiyo mamiriro ezvinhu apo immune system inotanga kurwisa myelin iyo inofukidza nerves, iyo, inotungamira kune yakaderedzwa kana kusave nekukurukurirana pakati peuropi uye imwe muviri. Chirwere ichi chinogona kunge chichiremadza zvachose. Nekudaro, kwekutanga kutsvagurudza kunoratidza kuti PEA, kana ikapihwa pamwe chete ne-interferon-beta1a, inogona kubatsira kudzikisa zviratidzo zvakabatana neMultiple Sclerosis.
⑤ Iyo Inobudirira Kupesana neGlaucoma uye Temporomandibular Disriers
Glaucoma mamiriro ezvinhu anokanganisa Optic nerve uye chiri kutungamira chikonzero chekupofomadza pakati pevanhu vane makore makumi matanhatu zvichikwira. TMJ kusagadzikana, kune rumwe rutivi, kunokonzera kurwadziwa kweaya. Tsvagiridzo inoratidza kuti Palmitoylethanolamide kana PEA inogona kushandiswa kubata maronda anokonzerwa nemamiriro ese aya.
⑥ Zvimwe Zvipo
Zvimwe kunze kwekushandiswa kwakataurwa pamusoro, PEA inokurudzirwazve kurwadziwa kwemhodzi pamwe neanopashure kwekuvhiya analgesic. Mune zvimwe zviitiko, yakashandiswawo kurapa mamwe mamiriro, sekushungurudza musoro, kushungurudzika, eczema, endometriosis, autism, chirwere cheitsvo uye kurwadziwa kwetsvo. PEA yakaratidzawo kumwe kushanda kwakanangana nekurema. Nekudaro, kutsvakisisa kwakawanda kunodiwa munzvimbo idzi.
Kwemakore, zvidzidzo zvakasiyana zvakashandisa zvakasiyana muyero uye nekudaro, hapana dosi inogona kunzi yakakwana. Nekudaro, vanhu vanorayirwa kuti vachengete yavo Palmitoylethanolamide (PEA) dhayeti yekudya pasi pe300-1,200 mg pazuva. Avo vanotora Palmitoylethanolamide zvinowedzerwa vanorayirwa kutora 350-400 mg katatu pazuva uye nguva yekuyera haifanire kudarika mwedzi miviri zvachose.
(1) Gabriella Contarini, David Franceschini, Laura Facci, Massimo Barbierato, Pietro Giusti & Morena Zusso (2019) 'A co-ultra micronized palmitoylethanolamide / luteolin composite inoderedza kiriniki mamakisi uye chirwere-chakakodzera mamorekuru mamaki mune yegonzo modhi yekuyedza autoimmune encephalomyelitis' Chinyorwa cheNeuroinflammation,
(2) Maria Beatrice Passavanti, Aniello Alfieri, Maria Caterina Pace, Vincenzo Pota, Pasquale Sansone, Giacomo Piccinno, Manlio Barbarisi, Caterina Aurilio & Marco Fiore (2019) 'Clinical application ye palmitoylethanolamide mukutambudzika kwekutambudzika: protocol yekuongorora kwekuongorora', Yakarongeka Ongororo vhoriyamu,
(3) Eleonora Palma, Jorge Mauricio Reyes-Ruiz, Diego Lopergolo, Cristina Roseti, Cristina Bertollini, Gabriele Ruffolo Pierangelo Cifelli, Emanuela Onesti, Cristina Limatola, Ricardo Miledi, Maurizio Inghillerid (2016) 'Acetylcholine receptors kubva kune tsandanyama dzevanhu sezvinangwa zvezvemishonga zveALS kurapa', Proc Natl Acad Sci US A.,
(4) Di Cesare Mannelli, G. D'Agostino, A. Pacini, R. Russo, M. Zanardelli, C. Ghelardini, A. Calignano (2013) 'Palmitoylethanolamide Chirwere-Chinoshandura Mumiriri muPeripheral Neuropathy: Ruregerero Rwurombo uye Neuroprotection Govera PPAR-Alpha-Mediated Mechanism', Vagadziri Kupikisa.
(6) RWENDO RWOKUONGORORA ZUVA
(7) OLEOYLETHANOLAMIDE (OEA) -IYO GWINYA REMAOKO RENYAYA YAKO
(8) Anandamide VS CBD: Ndeipi Iri Nani Kune Rako Hutano? Zvese zvaunoda Kuti Uzive Nezvavo!
(9) Zvese zvaunoda Kuti Uzive NezveNicotinamide Riboside Chloride
(10) Magnesium L-Threonate Zvekuwedzera: Zvakanakira, Dosi, uye Mhedzisiro Mhedzisiro
(11) Wepamusoro 6 hutano Kubatsira kweReververrol Supplements
(12) Pamusoro mashanu mabhenefiti Ekutora Phosphatidylserine (PS)
(13) Pamusoro mashanu mabhenefiti Ekutora Pyrroloquinoline Quinone (PQQ)
(14) Iyo Yakanakisa Nootropic Inowedzera yeAlfa GPC
(15) Iyo Yakanakisa Kurwisa-Kukwegura Supplement yeNicotinamide Mononucleotide (NMN)
bardzo bolą mnie stawy ini mięśnie, mam tez słabą odporność czy przyjmowanie PEA pomoże mi. Choruje również na nerwicę lękową czy kune nie będzie kolidować z psychotropami.
Yakachengeteka imbwa yangu ine chirwere chisingaperi cheLymes?
Inoshamisa saiti yauinayo pano asi ini ndanga ndichida kuziva kana iwe uchiziva kune chero nharaunda maforamu anofukidza iwo mimwe misoro inotaurwa nezvayo pano? Ndinoda chaizvo kuve chikamu chenharaunda kwandinogona kuwana mazano kubva kune vamwe vane ruzivo vane ruzivo rwakafanana. Kana mune mazano, ndapota ndizivisei. Komborerwa!
Ndanga ndichitora PEA (uye CoQ10) kubvira chirimo. Pakutanga, ini ndaisakwanisa kuzvitsungirira nekuda kwematambudziko emukati. Iye zvino hutsi hwangu hwehuropi uye nemusoro zvave kuda kuenda, zvinova zvakanaka kusanzwisisika ndichifunga kuti ndinazvo mazuva ese.
Ini ndinotora PEA. Iyo zvisina kunangana inoshanda pane cannabinoid receptors. Iyo ine yekuwedzera mhedzisiro painotorwa ne cannabinoids senge CBD. Inowanzo kutorwa ku1,200mg / zuva asi ini ndinotora 400mg chete nekuti ini ndiri padanho rakakura kudaro reCDD kare (200mg / zuva).
PEA inowanzoitika mumuviri, isiri muropa, haugone kuwana shiviriro uye zvave zvichiratidzwa kuti zvinoshanda pakurwadziwa uye kuzvimba muzvidzidzo kubvira ma1950's ..
Murume wangu anoitora uye anofunga kuti yakanaka.
Ndinoda kukutendai nekuedza kwamakaita kunyora iyi webhusaiti. Ndiri kutarisira kuona iwo mamwe epamusoro-giredhi zvemukati kubva kwauri gare gare futi futi. Muchokwadi, kugona kwako kunyora kwakandikurudzira kuti ndiwane yangu yega, yangu saiti ikozvino;)
Nekuti imwe yenjodzi dzakanyanya dzeCOVID-19 inoita kunge cytokine dutu uko kuzvimba kunokonzeresa kukuvara kukuru immune system yedu isati yagadzira masoja ekudzivirira kurwisa hutachiona zvinoita sekuwedzera kwakachengeteka kunobatsira kudzikisa huwandu hwecytokines nzira yakanaka yekubvumira immune system nguva yekurwisa chirwere ichi.
Chengetedza izvi kuenda ndapota, basa rakakura!
Kwandiri zvinobatsira nekuzvimba. Zvakare rubatsiro rwakakura rwekurara, tora kukotsira kubva pahafu yedosi.
Izvi zvinhu zvinotaridzika kuvimbisa
Nyanzvi yangu yezvirwere zvemuviri yakakurudzira Palmitoylethanolamide. Ndakatora Mirica PEA kwemwedzi mitatu. Zvakaoma kuva nechokwadi. Zviratidzo zvangu zvave nani zvakanyanya, asi nguva yakawanda yapfuurawo. Ini ndangomira kuitora uye ini handisi kucherechedza mutsauko wakakura munzira yandinonzwa. Ndakanga ndisina mhedzisiro pandainotora, saka zvirinani zvaiita kunge zvisingakuvadze.
Zvinhu zvakawanda zvakanaka pane isina chinhu mudumbu, kunze kwekunge zvakakomba zvine mutsigiro zvichiratidza kunatsiridzwa kwekutora uye kwete kungoita mafuta-solubility, kunze kwekunge zvichikonzera dumbu nyaya (zinc)
Ini ndaizotora izvo padumbu risina chinhu uye pamwe ndakaita kakawanda zvakadaro.
Welp ndakatora njodzi ndikaraira vamwe nhasi. Ndaneta nemarwadzo emimba ndinovimba zvinoshanda.
Palmitoylethanolamide ndeye endogenous fatty acid amide. Izvi zvinoreva kuti iri mumuviri wako izvozvi.
Vamwe vanhu vanongoita zvishoma nezvayo, uye ako mazinga anodonha paunenge uchikura. Saka kuwedzera kunogona kubatsira kudzosa iwo mazinga kumashure. Inowanikwawo muzvikafu, zvakare. Zvakachengeteka chaizvo. Vanhu vazhinji havanzwisise kuti chii, uye vanorasikirwa nepfungwa yacho zvachose.
Kana iwe uri mumwe munhu ane akanaka echisikigo mazinga ePEA mumuviri wako, ungangodaro hauzonzwa chero chinhu. Nekudaro, vanhu vane zvimiro zvakasikwa zvakadzika vanonzwa mhedzisiro zvakanyanya. Ichi ndicho chikonzero iwe uchiona kutarisisa maonero pazviri.
Nekurwadziwa ini ndichangobva kuwana PEA yandave ndichitora pa1200mg zuva nezuva uye zvinoita kunge iri kubatsira
Amai vangu vakapinda kuna rheumatologist rimwe zuva, uye vakaudzwa kuti biomarkers yekuzvimba yaive yakanaka, kekutanga nguva! Ini handirangariri chaizvo-- uye ndine chokwadi chekuti amai vangu hava-- chiyero chavaishandisa, asi ivo vakandiudza nzvimbo yakakwana yeiyi biomarker yekuzvimba kwakazara yaive pakati pa0-30, uye anowanzo pfuura 60. Panguva ino, anga aine makore gumi nemashanu.
Ini ndaigara ndichipedza hafu yeawa yangu kuverenga izvo zvemapeji ewebhu nguva dzese pamwe nekapu yekofi.
Palmitoylethanolamide iri nani pakuzvimba uye kurwadziwa. Oleamide zviri nani pakurara. Ose ari maviri akanaka kuzvidzivirira. Isu takasarudza PEA mune Yedu Yekuzvidzivirira kuitira kuti isakonzere kutsimwaira.
Ini zvakare ndine migraines zvimwe kazhinji, kazhinji 1-2 nguva pamwedzi uye Palmitoylethanolamide ndiwo manenji kwandiri ndichiita migraine.
Ndanga ndichitora PEA muupfu. Ndakazviwana kuti dzigadzirise zvishoma marwadzo pamusoro pezvimwe zvinhu zvese zvandiri kutora.
Zvakanaka imwe ndeye (P) Phenyl (E) ethyl (A) amine uye imwe yacho (P) Palmitoyl (E) ethanol (A) amide. Zvakare, vanhu vanovhiringidza Phenylethylamine nePhenylalanine nguva dzose, pamwe neCytisine neCysteine. Dzimwe nguva makemikari makemikari anopereterwa padyo chaizvo, uye dzimwe nguva ane zvakafanana chidimbu. Handikwanise kuti ndinoifarira, asi Palmitoyalethanolamide inotaura mukanwa. Saka kupfupisa iri nyore kwazvo.
Ndakaitora nekuda kwekurwadziwa kwedundira (chikonzero chisingazivikanwe) uye yakashanda zvikuru. Ndiwo musanganiswa mukuru pakurapa kwembwa yangu (yekurwara) uye zvinoita sekunge zvinobatsira.
Hapana mhedzisiro kwatiri. Hazvina kukanganisa kurara kwangu. Ah! Asi zvakabvisawo mabvi angu anorwadza, yaive bhonasi isingatarisirwe.
PEA inondibatsira kuti ndione kuti ndine huwandu hwekurwadziwa hwakaramba huchienderera, uye zvakanaka kana izvo zvichiderera kwechinguva.
Ini ndatambura nekurwadziwa kusingaperi musana kweanoda kusvika makore gumi. PEA inoita kuti ive pakati nepakati, uye kana marwadzo angu akajairika kushungurudzika, PEA inoita kunge inoita kuti muviri wangu wese unzwe kugadzikana.
Palmitoylethanolamide ndeye endogenous fatty acid amide. Izvi zvinoreva kuti iri mumuviri wako izvozvi. Vamwe vanhu vanongoita zvishoma nezvayo, uye ako mazinga anodonha paunenge uchikura. Saka kuwedzera kunogona kubatsira kudzosa iwo mazinga kumashure. Inowanikwawo muzvikafu, zvakare. Zvakachengeteka chaizvo. Vanhu vazhinji havanzwisise kuti chii, uye vanorasikirwa nepfungwa yacho zvachose. Kana iwe uri mumwe munhu ane akanaka echisikigo mazinga ePEA mumuviri wako, ungangodaro hauzonzwa chero chinhu. Nekudaro, vanhu vane zvimiro zvakasikwa zvakadzika vanonzwa mhedzisiro zvakanyanya. Ichi ndicho chikonzero iwe uchiona kutarisisa maonero pazviri.
Zvino maererano nemubvunzo wako nezve COX-2 chaizvo, iri modulator yeCOX-2, kwete yemakwikwi inhibitor. Iyo inosunga kune endocannabinoid receptors GPR55 uye GPR119. Ndiwo marongero anoita kutaura kwecyclooxygenase-2 (COX-2) pamwe neisingagone nitric oxide synthase (iNOS). Iyo zvakare PPAR-α agonist, iyo inotungamira IkB-alpha kudzikisira uye p65 NF-kappaB yenyukireya kufambisa. Yayo PPAR-α maficha ari chaizvo maitiro ayo ekuderedza neuroinfigueation. Pamusoro pezvisungo zvaro zvakasunga, zvinotungamira mukuwedzera kusunga kweanandamide kune iyo CB1 uye CB2 receptors, inova muviri wako wekutanga endocannabinoid. Icho chikamu chinotonhorera chaizvo!
Ingoida kungoisa posvo nezve ichi chisina kujairika chinhu chiri kuvimbisa zvakanyanya kune vasingaperi vanorwadziwa varwere. Palmitoylethanolamide (PEA) ine fatty acid amide inoitika zvakasikwa mumuviri wemunhu uye mumitumbi yemamwe akawanda mhuka nemiti. Mumwe chiremba wechiItaly anonzi Rita Levi-Montalcini akawana kuti PEA ine anti-kupisa uye analgesic zvivakwa
Mune bofu rakapetwa kaviri, kurongedzwa kwe placebo pamwe nevarwere mazana matanhatu nematanhatu ekurwadziwa, varwere vaida kurapwa (NNT) kuti vasvike makumi mashanu muzana ekuderedza marwadzo zvichienzaniswa nebaseline yaive 636 mushure memavhiki matatu ekurapwa.
PEA iri kuongororwa yemhando dzakawanda dzemarwadzo. Hapana mhedzisiro yakaonekwa sezvandaigona kutaura.
Mini-wongororo inokurukura nezvekushandiswa kwePalmitoylethanolamide mukurapa kwekurwadziwa kusingaperi. Kune mashoma chete zvidzidzo pazviri muBS varwere uye mumhuka mhando dzeBS. Zvichipa iro basa reiyo endocannabinoid system mune yematumbu system iri chinyorwa chinonakidza kuti uenderere mberi kuongorora basa rePEA uye zvinogamuchirwa zvinogamuchirwa mukurapa kurwadziwa.
Palmitoylethanolamide (PEA) yakachengeteka zvakadii?
Ini ndangobva kuraira imwe PEA poda uye ichangosvika mune tsamba nhasi. Ini ndanga ndichiita imwe yekuwedzera kutsvagurudza nezve kana paive nenjodzi nePEA nekuti iri COX2 inhibitor.
Zvakachengeteka here kwandiri kutora PEA?
Palmitoylethanolamide akarapa kurwadziwa kwetsinga yangu sechishamiso!
Ini ndaida kukanda izvi kunze sekunge mumwe munhu achawana izvi zvichibatsira sezvandakaita. Ndave nemarwadzo etsinga asingachinjiki kweanopfuura makore makumi maviri. Ndanga ndiri kuStanford, ndanga ndiri pane zvese kubva kuFentanyl kuenda ku morphine kuenda kuoxy uye benzos, anti depressants nezvimwe. Zvimwe zvinhu zvakabatsira asi hapana chakashanda. Zvairwadza mazuva ese pese pandairara kana kugara pasi. Dzimwe nguva zvainetsa kufamba. Iyo itsvo nhaurwa mumusana wangu wezasi kubva kune yekare kuvhiyiwa inokanganisa pudendal nerve yangu. Kurara chaive chinhu chandaiwana maminetsi makumi matatu panguva uye kazhinji chaienda mazuva ndisina kana kumbowana chero zvachose.
Munguva pfupi yapfuura mumwe munhu wandinoziva akakurudzira kuti ndiedze chinhu chinonzi PEA. Ndakanga ndisina zero kutenda kwaigona kushanda. Asi zvaiita senge yakachengeteka zvakakwana. Ndakazvitanga icho chinhu chinowanikwa paAmazon uye chave chakadzidzwa kwemakore makumi matanhatu asi ini ndakanga ndisati ndambonzwa nezvazvo. Yayo inonzi Palmitoylethanolamide (PEA, isingafanirwe kuvhiringidzwa nePhenethylamine iyo zvakare yakapfupikiswa PEA) Palmitoylethanolamide inowanzo kuwanikwa mumiviri yedu uye kudya kwedu. Iyo "fatty acid amide" ine mibairo mikuru pane endocannabinoid system (uye inosimudzira anandamide, yedu yekupedzisira cannabinoid).
Ndinotora 120mg kaviri pazuva. Pakutanga handina kuona chero chinhu. Muchokwadi svondo rekutanga raive rimwe remafirita akaipisisa andakave nawo mune imwe nguva. Pavhiki rechipiri ndakamuka mamwe mangwanani ndichiona kuti ndakarara husiku hwese. Kurwadziwa kwangu kwakange kwapera. Ndakafunga kuti kwaive kurwara. Ndakachema kubva mumufaro hapana kana chidiki. Yakavhara kare kwemazuva mashoma. Zvakanaka zvange zvave kupfuura mwedzi uye zvakadaro hapana kurwadziwa. PEA inozivikanwa kuti inoshanda seye anti kupisa uye yekurwadziwa kwemitsipa. Mamwe madiki emakiriniki ekuedzwa neDFA akatoratidza kuvimbisa munzvimbo idzi.
Iko kune TON yezvakataurwa zvinoitwa nevanhu kuti PEA inorapa mhando dzese dzezvinhu. IDK nezve zvese izvo. Zvese zvandinoziva iko kubatsira kurwadziwa kwangu kupfuura chero chimwe chinhu chandakambotora. Ini ndaenda zvangu marwadzo meds 100%. Ini ndakabvisa meds yangu yese uye ndichiri ndisina kurwadziwa !!! Vanachiremba vangu pfungwa dzakapururudzwa uye ari kuzozviedza nevamwe varwere.
Kana iwe uchizviedza zvipe iwo mashoma mashoma mavhiki. Yakakodzera kupfura. Yayo isingazivikanwe kudyidzana nemamwe ma meds kana kuve neyakavanzika chepfu muganho asi sekune chero chinhu chinotanga kunonoka. MaDosi ari pamusoro pe300mg anondipa musoro zvishoma.
Izvo zvinongoshanda pakurwadziwa kwangu kwetsinga. Ndichiri kunzwa marwadzo uye marwadzo. Zvikasadaro ndinongonzwa zvirinani. Kana iwe uchirwara neparipheral nerve pain zvakakodzera kuti uzvipfure.
Magnesium inozivikanwa nekukonzera kupenga hope, 5-HTP inopindirana nehope zvakare iirc.
Ini handikwanise kutora magnesium isingasviki 3h ndisati ndarara kana zvikasadaro ndinorota zvakanyanya, handigoni kurara zvakanaka.
Ndakaona Palmitoylethanolamide nguva pfupi yadarika uye ndaizozama. Pave neinenge vhiki kana zvakadaro kubvira pandakatanga kuishandisa uye zvakandibatsira zvishoma.
Zvinoita kuti ndinzwe ndakasununguka chaizvo chinova chinhu chandanga ndisingatarisiri.
Palmitoylethanolamide, Chikafu Chakakosha cheMarapirwo Ekurapa, Mukurapa Kwekurwara Kusingaperi: A Yakaunganidzwa Dhata Meta-ongororo. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26815246
Subjectively, chero mutsauko wekuti maviri aya mafuta acid amides anokukanganisa sei?
Ivo vaviri vanoita kunge vakafanana mune moa, vasina chokwadi kana zvakafanira kuti uedze imwe pamusoro peimwe. Kunyanya kutsvaga Immune balancing, bhonasi yekurara yemhando yekuvandudza.
Aya ndiwo maonero angu
Iko kuenderana kwaive kwakatsetseka, chena hupfu. Yakatorwa zvishoma nezvishoma, yakanga isina kunhuhwirira uye ichinyungudika zvishoma nezvishoma, pamwe nekuti isina kusanganiswa nemvura.
Ndakave neruzivo rwakakura mukati memazuva gumi kubva panguva yandakatanga kuitora.
Pave nemwedzi mishoma ikozvino uye ndinochida. Ndiri kunzwa zviri nani uye ini handina kuona chero mhedzisiro.
Ndiri kutora 600 mg kaviri zuva nezuva uye kweinopfuura rinopfuura vhiki uye mhedzisiro yacho yakanyanya.
Handina matambudziko nemagnesium asi 5htp ndisati ndarara yakandipa hope dzakaipa kare. Ini ndaifanira kufambisa iyo 5htp kusvika masikati.
Palmitoylethanolamide inondipihwa zororo kubva pakurwadziwa kwe fibromyalgia. Uye ini handichamuki ndichinzwa sekunge ndakarohwa netsvimbo muhope.